Ifowuni yeRazer 2 Iimpawu kunye neenkcukacha | I-Androidsis
Kunyaka ophelileyo ngeli xesha, umenzi wezinto zokudlala uRazer wazisa ngokusesikweni iRazer Ifowuni, ubomi abuzange bube nzima ngegama, i-smartphone yokuqala Udidi olutsha lwee-mobiles ezilungiselelwe ngabona bathandi bomdlalo. Inkampani ayibhengezi manani entengiso ebenayo iRazer Phone, kodwa kubonakala ngathi bekulindelwe.
Kwaye nditsho ukuba bekulindelwe, kuba uRazer usandula ukuveza isizukulwana sesibini seRazer Ifowuni, apho bongeze khona inombolo 2 ukwahlulahlula okokuqala. Njengoko bekulindelwe, uRazer iphucule ezinye zezinto nokuba, nangona babebalasele kwisizukulwana sokuqala, babesengozini yokuqhubeka nokucokiswa. Nazi zonke iinkcukacha kunye neempawu zeRazer Phone 2.
Esi sizukulwana sesibini sisinika ngokuchanekileyo Uyilo olunye kunye nescreen esinye, Ipaneli ye-Sharp IGZO ye-5,8-intshi ene-2k resolution kunye ne-120HZ yokuhlaziya inqanaba, ngenqanaba lokuqaqamba kwe-650 nits, 50% ngaphezulu kuneyokuqala. Isikrini sinika ukhuseleko lweCorning Gorilla Class 5. Ngaphakathi, sifumana i-Snapdragon 845 ehamba ne-8 GB ye-RAM.
Emuva, sibona indlela inkampani indawo yeekhamera itshintshileIikhamera ezidibanisa iisenzi ezimbini ze-12 mpx nganye ngekona ebanzi kunye neelensi yefowuni. Zombini iikhamera zinokuzinza okubonakalayo. Ukongeza, ngasemva sifumana ilogo yenkampani, ilogo enokutshintsha umbala kwizinto esizithandayo.
1 Razer Ifowuni 2 Ukucaciswa
2 Ifowuni yeRazer 2 ixabiso kunye nokufumaneka
Razer Ifowuni 2 Ukucaciswa
Isikrini Iphaneli ye-intshi ye-5.72 eyenziwe ngu-Sharp ngetekhnoloji ye-IGZO IPS. Ubungakanani besikrini 16: 9
Isigqibo 1.440 x 2.560 px kunye ne-513 dpi
Inkqubo ISanpdragon 845
Ukugcina I-64 / 128GB iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-512GB.
Cámara trasera Dual 12 mpx with aperture of f / 1.8 kunye f / 2.6. I-Optical stabilizer kunye ne-LED emibini.
Ikhamera yangaphambili 8 mpx ngokuvula f / 2.0
Ibhetri I-4.000 mAh iyahambelana nokutshaja okukhawulezayo nokungasebenzisi cingo
Inkqubo yokusebenza Android 8.1
Conectividad I-Bluetooth 5.0-Dual Band Wifi-Uqhagamshelo lwe-USB-C
Ubukhulu 158.5 mm x 79 mm x 8.5 mm
Ifowuni yeRazer 2 ixabiso kunye nokufumaneka
Isizukulwana sesibini iRazer Ifowuni 2 iya kufumaneka ngemibala emibini: I-Mirror Blck kunye ne-Satin emnyama. Iwebhusayithi yeRazer eSpain ayisasibonisi esi sizukulwana sesibini, into eyenziwa yiMelika, apho sinokubona ukuba ixabiso lenguqulo engama-64 GB yi- $ 799 (kunye neerhafu).
Esi sizukulwana sesibini sinokubhukishwa ngqo kwiwebhusayithi yomenzi, kodwa ayizukufika de kube ngu-Okthobha 22, umhla oza kuqala ukuthumela ngawo ukubhukisha kokuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ifowuni yeRazer 2 amanqaku kunye nokucaciswa